कसरी साइकल आविष्कार गरियो?
साइकलहरू "सेल्फ-प्रोपेल्ड" हुँदैनन्। ती मेशिनहरू मानिसद्वारा चालित छन्। तिनीहरू पनि पहिलो घरको सवारी साधन हुन् जसले सामान्य जनतालाई गाडीको दिशा र वेग नियन्त्रण गर्न दिन्छन्। घोडा भन्दा चाँडो, लगभग १ th औं शताब्दीको अन्ततिर ट्रेनको रूपमा छिटो, र किनकि ...
साइकलिंग कुनामा सुझावहरू साझेदारी गर्न
साइकलको सबैभन्दा खतरनाक अंश मोडिदै छ। धेरै नौसिखाहरू घुम्न डराउँछन्, र केहि अनुभवी राइडरहरू टर्निंगमा खासै राम्रो हुँदैन। आज जियाओबियनले तपाईंलाई साइकलिंग कुनाहरूको लागि केहि सुझावहरू साझा गर्दछ। स्लोपका अनुसार हामी टर्नलाई अपहिल टर्न, फ्ल्याट पास टर्न, डाउनहिल टीमा विभाजन गर्न सक्दछौं।
साइकल हेलमेटको बारेमा १० गल्तीहरू सुरक्षा जोखिमबाट बच्न!
मिथ्या १: हल्का हेलमेट, राम्रोसँग तुलनात्मक हिसाबले, हल्का हेलमेट, राम्रो। तर हल्का सवारी हेलमेट, कम राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमाणीकरण परीक्षा मानक पारित हुनेछ, र अधिक सापेक्ष मूल्य। त्यसैले हेलमेट छनौट को आधार छ कि ...
म किन सवारीमा जिद्दी गर्दछु! यो लेख पढे पछि, तपाईले बुझ्नुहुनेछ!
जब म साइकल यात्रामा जान्छु, म हावाको आराम महसुस गर्दछु। km किमी साइकलको व्यायामको मात्रा १ किलोमिटर टहल्नको लागि उस्तै हो। तर जोगिंगले सवारीको आनन्द कम गर्दछ, र घुँडा, टाउको र अन्य जोडी खेलकुदमा घाइते हुने खतरामा छ। साइकलिंग टहल्न भन्दा पनि राम्रो छ! प्रशिक्षण पछि, शारीरिक ...
सवारी पछि कसरी खानु पर्छ? तीनवटा कुरा जुन तपाईंलाई "भोक" बारे जान्नुपर्दछ
राईडिंग "अधिक खान" को लागि बहाना हुनुहुन्न। सवारी पछि, मलाई भोक लागेको छ। म तौल घटाउन चाहान्छु तर मद्दत गर्न सक्दिन तर बढि खानु। मैले के गर्नुपर्छ? निम्न सामग्रीले तपाईंलाई जवाफ दिनेछ, अमेरिकन एथलेटिक A अनुसार एडिटरको साथ एक नजर हेरौं ...
विज्ञ साझेदारी:bचरणहरू साइकल प्याकेजि perfect गर्न उत्तम
चाहे तपाईं साइकल दौडमा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ वा साइकल यात्रा, तपाईं घरबाट बाहिर निस्केको क्षणदेखि हामी तपाईंको कारको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता गर्छौं, विशेष गरी यो चोरी भएको छ भने। अब म कसरी मेरो यात्राको बर्षको अनुभव प्रयोग गर्ने छु कसरी राम्रो यात्रा गर्ने बारे कुरा गर्न ...
'फ्लो स्टेट' भनेको के हो? कसरी माउन्टेन बाइकरहरू प्राय: त्यसमा प्रवेश गर्न सक्दछन्?
जे भए पनि 'फ्लो स्टेट' के हो? फोरल्ली भन्छिन्, "यो धेरै मानिसहरूका लागि किन हामी यि खेलकुदमा भाग लिन्छौं।" "तपाइँ आफ्नो जीवनको बाँकी तनावलाई अवरुद्ध गर्न सक्नुहुन्छ र शुद्ध आनन्दको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।" फ्लो स्टेटको विचार अनुसन्धानकर्ता मिहाली सिसकजेन्टमिहालिलाई फिर्ता जान्छ, एक अन्वेषक ...
Zhengxin टायरको -० बर्षेको विकास पथलाई बुझ्नको लागि एउटा तस्वीर
30० भन्दा बढी बर्षदेखि, झेx्गक्सिन टायर "केही पनि होइन" को प्रक्रियामा गएको छ र 30० भन्दा बढी बर्षमा चिनियाँ बजारमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। उही समयमा, Zhengxin टायर प्रगति गर्न को लागी कटिबद्ध छ, सफलताहरू गर्न जारी राख्नुहोस् र transcende प्राप्त गर्न ...
माउन्टेन बाइक प्रचलनहरू २०२१: नवीनता र अवसरहरू (part1)
बाइक पार्क, तल देश, E-MTB बूम - माउन्टेन बाइक उद्योग परिवर्तन हुँदैछ। यो यति धेरै बाइकहरू आफै होइनन् जुन नयाँ लक्षित समूहहरू द्वारा उनीहरूको प्रयोगको रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन्। हेर्नुहोस् सात सब भन्दा रमाईलो माउन्टेन बाइक ट्रेंड २०२१ सँगै हेर्नुहोस्। यो E-MTB पी पहिले दुई वर्ष लाग्यो ...
माउन्टेन बाइक प्रचलनहरू २०२१: नवीनता र अवसरहरू (part2)
एमटीबी प्रवृत्ति:: माउन्टेन बाइक टुरिज्म बढ्दैछ जबकि कोरोना स in्कटमा लामो दूरीको गन्तव्यहरूले ठूलो नोक्सानी भोग्नु परेको छ, धेरै जसो हिमाल बाइक क्षेत्रहरू वर्षभरि नै राम्ररी आएका छन्। यो संकट गर्मीले विशेष गरी देखाएको छ कि हाम्रो बाइक चलाउनमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। यस विशेषज्ञताको बाहेक हामी ...
COVID-19 प्रकोपको समयमा कसरी सुरक्षित रूपमा सवारी गर्ने
हामी मध्ये धेरैले तनाव कम गर्ने वा दैनिक तालिकाबाट मानसिक विच्छेद गर्ने एउटा तरिका हो। तपाईको बाइक चलाउनु भनेको सरकारले सिफारिश गरिरहेको छ। सरकारको वेबसाइटमा गतिविधिहरूका लागि सिफारिसहरूमध्ये निम्न हुन्: “केही ताजा हावाका लागि बाहिर जानुहोस्, एक रन, ...
विश्व किन्न को लागी भीड, चीनको साइकल "अर्डर फट" अर्डर अर्को वर्ष जुलाई सम्म निर्धारित गरीएको छ
२०२० मा वैदेशिक व्यापार उद्योगमा एउटा लोकप्रिय वाक्यांश छ: "फेब्रुअरीमा मास्क, मार्चमा निधार बन्दुक, अप्रिलमा कपडा पग्लिनेछ, मेमा हेलमेट र जुनमा साइकल।" उद्योगको विकास मागको प्रकोपबाट संचालित हो। दृश्य बारम्बार यो मंचन गरिएको छ ...
साइकल हेलमेटका बारे १० वटा गल्तीहरू हटाउन ...
म किन सवारीमा जिद्दी गर्दछु! पढे पछि ...
सवारी पछि कसरी खानु पर्छ? तीन पातलो ...